हसिना कुर्दै श्रद्धा - बलिउड - साप्ताहिक
हसिना कुर्दै श्रद्धा
अभिनेत्री श्रद्धा कपुर आफ्नो महत्वाकांक्षी चलचित्र हसिना पार्करको प्रतीक्षामा छिन् । यो चलचित्रको प्रदर्शन विभिन्न कारणले तीन पटकसम्म सारिएपछि श्रद्धाको व्यग्रता बढेको छ ।
अगस्ट १८ का लागि निर्धारित पछिल्लो मिति पनि सरेपछि श्रद्धा यतिबेला चिन्तितसमेत भएको बताइन्छ । यसअघि उक्त चलचित्र जुलाई १४ मा प्रदर्शन हुने कुरा थियो । त्यसलाई परिवर्तन गर्दै जुलाई २८ को नयाँ मिति तोकियो । उक्त मिति पनि सारेर त्यसलाई फेरि एकपटक अगस्ट १८ मा पुर्‍याइयो । अन्त्यमा आएर यो चलचित्र सेप्टेम्बर महिनामा मात्र प्रदर्शन हुने भनिएको छ । निर्माता नाखिद खानका अनुसार अगस्टमा थुप्रै चलचित्र प्रदर्शनमा आउने भएकाले हसिना पार्करको प्रदर्शन मिति सारिएको हो ।
१८ अगस्टमा बरेलीकी बर्फी तथा पार्टिसन १९४७ प्रदर्शन हुने निश्चित छ । ११ अगस्टमा अक्षय कुमारको ट्वाइलेट एक प्रेम प्रदर्शन हुँदैछ ।
हिसिला महर्जन बनिन् लिरिल फ्रेस फेश
कसैसँग एउटा प्रश्न सोध्नुपर्दा कसलाई के सोध्नुहुन्छ ?
बलिउडका टपटेन फेसबुक सेलिब्रेटी असार २, २०७५
यो कस्तो नौटंकी ? जेष्ठ ३०, २०७५
१० वर्ष कान्छासँग डेटिङ ! जेष्ठ २९, २०७५
विराटले दिए संकेत जेष्ठ २८, २०७५
सहकर्मीसँगै लगनगाँठो जेष्ठ २५, २०७५
जिरोमा श्रेयाको इन्ट्री जेष्ठ २४, २०७५
सुपर हिरोमा दीपिका जेष्ठ २३, २०७५
सोनमको उत्साह जेष्ठ १८, २०७५
सलमानका टप १० जेष्ठ १६, २०७५
दिशाको नयाँ जेष्ठ १५, २०७५